Olee otu ndị nkwusa nwere ike isi kwadebe teknụzụ teknụzụ iji rute ndị na-ege ntị na-agbasa agbasa Martech Zone
2021 ga - eme ya ma ọ bụ mebie ya maka ndị mbipụta. Afọ na-abịanụ ga-eme ka nrụgide nke ndị nwe ụlọ mgbasa ozi okpukpu abụọ, naanị ndị egwuregwu kachasị nghọta ga-anọrịrị n'elu mmiri. Mgbasa ozi dijitalụ dị ka anyị si mara na ọ na-abịa na njedebe. Anyị na-akwaga n'ọma ahịa ndị ọzọ ezighi ezi, ndị nkwusa kwesịrị ịtụgharị uche n'ọnọdụ ha na usoro okike a.
Ndị nkwusa ga-eche ihe ịma aka ndị dị egwu ihu na arụmọrụ, njirimara onye ọrụ, na nchebe nke data onwe onye. Iji lanarị, ọ ga-adị ha mkpa ịnọ na njedebe nke teknụzụ. Ọzọkwa, m ga-emebi isi okwu 2021 ga-abụrụ maka nkwusa na guputa teknụzụ nwere ike idozi ha.
Ihe ma Aka Nye Ndị Bipụtara Akwụkwọ
2020 wee bụrụ oke mmiri ozuzo zuru oke maka ụlọ ọrụ ahụ, ebe ndị mbipụta diri nrụgide okpukpu abụọ site na ndagide akụ na ụba na iwepụ nke NJ ad. Iwu mmebe iwu maka nchekwa data nkeonwe na ibelata mmefu ego nke mgbasa ozi na -emepụta ọhụụ ọhụụ ebe ibipụta akwụkwọ dijitalụ kwesịrị ịgbanwe na isi isi nsogbu atọ.
Nnukwu nnwale mbụ maka ndị nkwusa bụ ọdịda akụ na ụba nke COVID-19 kpatara. Ndị na-akpọsa ngwa ahịa na-akwụsịtụ, na-etinyefe mkpọsa ha, ma na-ekenye ndị ọzọ mmefu ego na ọwa ndị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu.
Oge nduzi na-abịa maka mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwado. Dabere na IAB, nsogbu a na-akpata aghara aghara emeela ka ọnụọgụ akụkọ, mana ndị na-ebipụta akwụkwọ enweghị ike ịkọwa ya. okpukpu abụọ ka o kwere omume ka ndị na-azụ ahịa mgbasa ozi vs. ndị ọzọ kwalite ya.
Buzzfeed, mgbasa ozi nke malitere ịrịa ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ n'ime afọ ole na ole gara aga, n'oge na-adịbeghị anya emejuputa ndi oru n'akụkụ ogidi ndị ọzọ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ dijitalụ dịka Vox, Vice, Quartz, The Economist, wdg. Ọ bụ ezie na ndị na-ebipụta ụwa nwere ụfọdụ nkwụsi ike n'oge nsogbu ahụ, ọtụtụ mgbasa ozi mpaghara na mpaghara apụghị ahịa.
Otu n’ime nsogbu kasịnụ maka ndị na - ebipụta akwụkwọ n’afọ na - abịanụ ga - ehiwe njirimara onye ọrụ. Site na nhichapụ nke kuki ndị ọzọ nke Google, adreesị gafere ọwa weebụ ga-apụ n'anya. Nke a ga-emetụta ichebe ndị na-ege ntị, ịtụgharị uche, okpu ugboro ugboro, yana njirimara emetụ ọtụtụ.
Ebumnuche nke mgbasa ozi dijitalụ na-efunahụ NJ ndị nkịtị, nke ga-eduga n'ọdịdị ibewa ala. Industrylọ ọrụ ahụ enyelarị ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji chọpụta nsonaazụ, dabere na nyocha arụmọrụ, dị ka Sandbox Nzuzo Google, na Apple's SKAd Network. Agbanyeghị, ọbụlagodi azịza kachasị elu n'ụdị ahụ agaghị eduga na ilaghachi azụmaahịa dịka ọ dị na mbụ. N'ụzọ bụ isi, anyị na-aga n'ihu webụ na-enweghị aha.
Ọ bụ mpaghara ọhụụ, ebe ndị mgbasa ozi ga-agba mbọ izere itinye ego n'ihe banyere ịmịcha ihe, iru ndị ahịa ozi na-ezighi ezi, yana ịchụpụ oke wdg. Ọ ga-ewe oge iji chepụta ụzọ ọhụrụ nke nnweta onye ọrụ ga-achọ ngwaọrụ ọhụrụ ụdị njirimara iji nyochaa ịdị irè na-enweghị ntụkwasị obi na NJ mgbasa ozi njirimara.
Ọganihu na iwu nzuzo, dị ka nke Europe Iwu Nlekọta Data Nchekwa (GDPR) na Iwu Nzuzo Ndị Ahịa California nke 2018, na-eme ka o sie ike nke ukwuu ịkwado ma hazie mgbasa ozi maka omume ịntanetị nke ndị ọrụ.
Iwu ndị ahụ na-elekwasị anya na data onye ọrụ ga-akọwa mgbanwe ndị na-abịa na nchịkọta teknụzụ na usoro data data. Regukpụrụ iwu a na-agbagha omume ndị dị ugbu a nke ịchụso omume onye ọrụ mana ọ ga-emepe ụzọ maka ndị mbipụta iji kpokọta data ndị ọrụ jiri nkwenye ha.
Ọnụ ọgụgụ nke data ahụ nwere ike ibelata, mana iwu ahụ ga-abawanye ogo nke data dị na ogologo oge. Ndị nkwusa kwesịrị iji oge fọdụrụ rụọ ụdị maka mmekọrịta dị mma na ndị na-ege ntị. Iwu nzuzo kwesiri ikwekọ na teknụzụ nke onye mbipụta akwụkwọ ma bịaruo njikwa data. Onweghi uzo o bula g’enweta ihe nile n’ihi na odi nzuzo di iche na ahia di iche.
Kedụ ka ndị mbipụta akwụkwọ ga-esi nwee ihe ịga nke ọma na mbara ala ọhụrụ ahụ?
Na ahịa ọhụrụ e kewara ekewa, data ndị ọrụ bụ ihe kacha baa uru maka ndị mgbasa ozi. Ọ na-enye ụdị nghọta maka ndị ahịa, ọdịmma ha, ịzụta ihe ịchọrọ, na akparamàgwà na akara aka ọ bụla. Agbanyeghị, iwu nzuzo nzuzo na nso nso a nke NJ mgbasa ozi na-eme ka akụ a dị ụkọ.
Otu ohere kasịnụ maka ndị mbipụta taa bụ ịkekọrịta data nke otu nke 1st, rụọ ọrụ ya na sistemụ ndị dị na mpụga, ma ọ bụ nye ya ndị mgbasa ozi maka ịkọwapụta nke ọma na ngwongwo ha.
Ndị nkwusa na - echekwa ihe na - eji algorithms mmụta igwe iji ghọta ọdịnaya dị mma karị ma chịkọta profaịlụ omume nke mbụ, nke ga - abụ n'ezie arụmọrụ ga - arụ ọrụ maka otu ụdị. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ nyochaa ụgbọ ala nwere ike ịnakọta ngalaba nke 30-40 ndị ọkachamara na-akpata ego; isi ahia maka igbapu sedan. Magazin ejiji nwere ike ịnakọta ụmụ nwanyị nke ụmụ nwanyị nwere nnukwu ego maka ụdị uwe dị oke ọnụ na-ezube.
Ebe nrụọrụ weebụ nke oge a, nyiwe, na ngwa na-enwekarị ndị na-ege ntị na mba ụwa, nke na-adịkarịghị enwe ike ịnweta ego site na azụmahịa. Mmemme nwere ike ịnapụta ochicho zuru ụwa ọnụ site na oRTB na usoro ịzụ ahịa ihe mmemme ndị ọzọ yana ọnụahịa nke ahịa maka nnabata.
Buzzfeed na nso nso a, nke na-ebubu mbido njikọta ya, laghachiri n'usoro ihe omume ọwa maka ire ad ha. Ndị nkwusa chọrọ azịza ga-enyere ha aka ijikwa ndị mmekọ na-agbanwe agbanwe, nyochaa ntinye mgbasa ozi kachasị mma na nke kacha njọ, ma chọpụta ọnụego ego.
Site na ịgwakọta ma kwekọọ na ndị mmekọ dị iche iche, ndị nkwusa nwere ike nweta ọnụahịa kachasị mma maka ntinye ego ha yana ọnụọgụ fọdụrụnụ. Isi nkụnye eji isi mee bụ teknụzụ zuru oke maka nke ahụ, yana yana ntọala pere mpe, ndị nkwusa nwere ike ịnabata ọtụtụ ọnụ ahịa site na nyiwe dị iche iche. Nkụnye isi isi bụ teknụzụ zuru oke maka nke ahụ, yana obere ntọala, ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere ike ịnabata ọtụtụ ọnụ ahịa site na nyiwe dị iche iche.
Mgbasa mgbasa ozi na-akwado mgbasa ozi kwesịrị ịnwale ụdị mgbasa ozi ndị ama ama iji kwụọ ụgwọ maka ọghọm mgbasa ozi kwụsịtụrụ.
Na 2021, ihe ka mkpa nke mgbasa ozi ga-arịwanye elu na mgbasa ozi vidiyo.
Ndị na-azụ ahịa nke oge a na-efu ihe 7 awa na-ekiri vidio dijitalụ kwa izu. Vidio bụ ụdị ọdịnaya kachasị emetụta. Ndị kiriri jidesie ike 95% nke ozi mgbe ị na-ele ya na vidiyo ma e jiri ya tụnyere 10% mgbe ị na-agụ ya.
Dabere na akụkọ IAB, ihe ruru ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke mmefu ego dijitalụ na-ekenye maka mgbasa ozi vidiyo, na ekwentị mkpanaaka na desktọọpụ. Vidiyo na-ewepụta mmetụta na-adịgide adịgide nke na-ebute ntụgharị na ire ere. Iji nweta ọtụtụ ihe n'egwuregwu mmemme, ndị nkwusa chọrọ ikike iji gosipụta mgbasa ozi vidiyo, nke ga-adaba na isi ihe ntanetị chọrọ.
Ntanetị Tech Maka Na-eto Eto
N’oge ọgba aghara a, ndị nkwusa na-eme ihe niile ha nwere ike ime iji nweta ego ha ga-enweta. Otutu ihe omuma nke teknụzụ ga-enye ndị nkwusa ohere ịmeghe ikike ha nwere ma mụbaa CPM.
Teknụzụ maka iji data nke mbụ mee ihe, na-eji usoro mmemme nke oge a, na ịgbasa usoro mgbasa ozi na-achọ bụ akụkụ nke ihe ga-enwerịrị maka nchịkọta nke 2021 nke ndị mbipụta dijitalụ.
Ugboro ugboro, ndị nkwusa na-ezukọta ngwongwo teknụzụ ha sitere na ngwaahịa dị iche iche na-anaghị agbakọ nke ọma n'etiti onwe ha. Omume kachasị ọhụrụ na mbipụta dijitalụ na-eji otu ikpo okwu nke na-egbo mkpa niile, ebe ọrụ niile na-aga nke ọma n'ime usoro edo. Ka anyị nyochaa nke modul ga-haves nke integrated tech tojupụtara maka media.
Nke mbu, uzo nkwuputa nke onye mbipute kwesiri inwe sava ad. Ihe nkesa mgbasa ozi kwesịrị ekwesị bụ ihe dị mkpa iji rụọ ọrụ iji nweta mmetụta dị mma. Ọ kwesịrị inwe arụmọrụ iji jikwaa mkpọsa ad na ngwa ahịa. Ihe nkesa mgbasa ozi na-enye ohere ịtọlite ​​ngalaba mgbasa ozi na otu ndị na-echegharị ma nye ọnụ ọgụgụ oge na arụmọrụ nke oghere ad. Iji hụ na ọnụego zuru oke, sava mgbasa ozi kwesịrị ịkwado ụdị mgbasa ozi niile dị, dị ka ngosi, vidiyo, mgbasa ozi mkpanaka, na mgbasa ozi bara ụba.
Nchịkwa Njikwa Data (DMP)
Site na njirimara arụmọrụ - ihe kachasị mkpa maka mgbasa ozi na 2021 bụ njikwa data onye ọrụ. Nchịkọta, nchịkọta, nkewa, na ntinye nke ndị na-ege ntị ga-arụ ọrụ taa.
Mgbe ndị nkwusa na-eji DMP, ha nwere ike ịnye ọkwa data ọzọ maka ndị mgbasa ozi, na-eme ka ogo na CPM dị na ngosipụta enyere. Data bụ ọla edo ọhụụ, ndị na - ebipụta akwụkwọ nwere ike ịnye ya ka ọ kwado ngwa ahịa nke aka ha, kọwaa echiche ndị ka elu, ma ọ bụ mee ka ha rụọ ọrụ na sistemụ ndị dị na mpụga ma chekwaa na mgbanwe data.
Mwepu nke NJ mgbasa ozi ga-ejupụta n'ọchịchọ maka data ndị ọzọ, na DMP bụ ihe dị oke mkpa iji kpokọta ma jikwaa data onye ọrụ, setịpụ ọdọ mmiri data, ma ọ bụ nyefee ndị mgbasa ozi site na grafụ ndị ọrụ.
Ngwọta Bidding Solution
Isi nkụnye eji isi mee bụ teknụzụ nke na-ewepụ asymmetry ọmụma dị n'etiti ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta gbasara uru ahịa. Isi nkụnye eji isi mee na-enye ndị otu niile ohere ị nweta ọnụahịa achọpụtara nke ọma maka oghere ad. Ọ bụ okushon ebe ndị DSP nwere ohere nha na ikike, n'adịghị ka nsụda mmiri na oRTB, ebe ha na-abanye ahịa na ntụgharị.
Imejuputa ndi isi ulo oru choro ihe mmepe, ndi ops nwere nnukwute ihe ga-edozi ihe di na Google Ad Manager na mbinye aka nkwekọrịta na ndi bidders. Jikere: ịtọ ntọala maka isi ihe ị na-agwa gị chọrọ ndị otu raara onwe ha nye, oge, na mbọ, nke bụ oge ụfọdụ ọbụna maka ndị nkwusa buru ibu.
Video na odi egwu
Iji bido inye mgbasa ozi vidiyo, usoro mgbasa ozi nwere eCPMs kachasị elu, ndị na-ebipụta akwụkwọ kwesịrị ịrụ ọrụ ụlọ. Mgbasa ozi vidiyo dị mgbagwoju anya karịa ngosipụta na ịkwesịrị ịkọwa maka ọtụtụ ọrụaka ọrụ aka. Nke mbu, ikwesiri ichota ihe nlere vidiyo kwesiri ekwesi na ihe eji enyere gi aka isi ihe. Addị mgbasa ozi ọdịyo na-arịwanye elu, na itinye ndị ọkpụkpọ ọdịyo na ibe weebụ gị nwere ike iwetara ndị ọzọ na ndị mgbasa ozi.
Nchịkwa Creative Management (CMP)
CMP bụ ihe dị mkpa maka ijikwa ihe mmemme mmemme maka ọtụtụ nyiwe na usoro mgbasa ozi. CMP na-edozi usoro njikwa okike niile. Okwesiri inwe ulo okike okike, ngwa oru eji edezi, idozi ma mekwaa ọkọlọtọ bara ụba site na ncha na ndebiri. Otu n'ime ihe dị mkpa nke CMP bụ arụmọrụ iji gbanwee ihe okike pụrụ iche maka mgbasa ozi na-arụ ọrụ na nyiwe dị iche iche na nkwado nke njikarịcha okike dị ike (DCO). Na, n'ezie, ezigbo CMP ga-enye ọbá akwụkwọ nke ụdị mgbasa ozi kwekọrọ na isi DSP na nyocha na arụmọrụ okike na ezigbo oge.
Na mkpokọta, ndị mbipụta ga-akwụ ụgwọ CMP nke na-enyere aka ịme ngwa ngwa na itinye usoro ihe okike na-enweghị mgbanwe na-adịghị agwụ agwụ, ma na-ahazi ma na-elekwasị anya n'ọtụtụ.
Iji zuo elu
Enwere ọtụtụ ihe eji arụ ụlọ maka ọganiihu nke mgbasa ozi dijitalụ. Ha gụnyere ike maka mgbasa ozi dị irè nke usoro mgbasa ozi ndị ama ama, yana usoro mmemme iji jikọta ya na ndị mmekọ kachasị mkpa. Akụkụ ndị a ga-arụkọ ọrụ ọnụ n'enweghị nsogbu, ma bụrụ nke kwesịrị ịbụ akụkụ nke nchịkọta teknụzụ arụkọtara ọnụ.
Mgbe ị na-ahọrọ otu teknụzụ dị n'otu kama ịkọkọta ya na modulu nke ndị na-eweta dị iche iche, ị nwere ike inwe ntụkwasị obi na a ga-ewepụta ndị na-emepụta ihe na-enweghị latency, ahụmịhe onye ọrụ na-adịghị mma, na nkwekọrịta ihe nkesa dị elu.
A kwesịrị ekwesị tojupụtara teknụzụ kwesịrị ịnwe arụmọrụ iji na-eje ozi vidiyo na ọdịyo, njikwa data, ntinye isi, na ikpo okwu njikwa okike. Ndị ahụ ga-enwerịrị mgbe ị na-ahọrọ ndị na-eweta ọrụ, ma ịkwesịrị idozi maka ihe ọ bụla pere mpe.
Tags: mgbasa ozibuzzfeedcmpcpmokike ikpo okwudata managementnhazi usoro njikwa datamgbasa ozi dijitalụdmpisi nkwekorita biddingnjirimaraahia teknụzụmartech tojupụtaranzuzommemmemmemme mmemmenkwusamgbasa ozi vidiyovideo mgbasa oziahịa vidiyoọkpụkpọ vidiyo